नबिर्सने बीस वर्ष… | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
नबिर्सने बीस वर्ष…
| 98 Views | Published Date : 1st January 2018 |
रचना : नबिन अभिलासी
नेपालको शासन व्यवस्था माथि धावा बोल्दै तत्कालिन नेकपा माओवादीले युद्ध सुरु गरेको दुई वर्ष भएको थियो । एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको बिरुद्धमा बन्दुक उठाएको समय आफैमा कहालीलाग्दो थियो । जस्को असर अहिले पनि ब्याप्त छ ।
त्यहि समयमा पत्रकारिताको कलम समाएकी थिइन्–लिला शाहले । दाङको घोराहीबाट राप्ती सन्देश साप्ताहिक प्रकाशन हुन्थ्यो । त्यहि पत्रिकामार्फत् आफ्नो पत्रकारिताको यात्रा सुरु गरेकी शाह २० वर्षपछि पनि यहि पत्रकारिताको क्षेत्रमा उत्तिकै क्रियाशील छिन्, त्यस्तै जोस, उस्तै जाँगर र उस्तै सक्रियताको साथमा ।
दाङको तत्कालिन रामपुर गाविस वडा नं. ४ शाहीपुर, हालको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. २ मा शाहको जन्म भएको थियो । आज भन्दा ४५ वर्ष पहिले विस २०२९ साल कार्तिक १७ गते जन्मिएकी शाहको शैक्षिक योग्यता विएसम्मको छ । रामपुरबाटै शिक्षाराम्भ गरेकी शाहको बाल्यकाल सामान्य रह्यो भने युवावस्था पनि केहि गरौँ, सिकौँ र परिवर्तनका लागि काम गरौ भन्ने भावनामा बित्यो ।
महिलामाथिको विभेद, अन्याय, सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका समुदाय र उनीहरुको अधिकारका लागि आवाज उठाउने सहाराको रुपमा कोही नभएपछि आफूलाई उनले त्यो ठाउँमा उभ्याइन् । २५ वर्षको रुपमा पत्रकारितामा होमिएकी शाह समाजसँग लड्नु, समाजको बिरुद्धमा लेख्नु, आवाज उठाउनु त्यति सहज थिएन । समाज परिवर्तनका लागि पत्रकारिता क्षेत्र अंगालेकी शाहलाई समाजबाटै आउने थम्की र सहयोगले निरास भने बनाएन । झन्–झन् बलियो बनाउँदै लग्यो ।
२०५४ देखि ५६ सम्म राप्ती सन्देश साप्ताहिकमा काम गरेकी शाह २०५६ देखि २०५९ सम्म हिमालय टाइम्स दैनिक र नयाँ युवाणि साप्ताहिकमा निरन्तर सक्रिय थिइन् । युद्ध चलिरहेकै थियो । आक्रमण, हिंसा, हत्या र विध्वंशका सामाचारहरु लेखिरहिन् । त्यतिमात्र हैन युद्धले पारेका प्रभावका बारेमा उनले लेखेका समाचारहरु पनि छापिए ।
जस्का कारण उनले धम्की समेत खानु पर्यो । २०५९ भदौदेखि माघसम्म ६ महिना गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा काम गरेकी शाहसँग टेलिभिजन पत्रकारिताको समेत राम्रो अनुभव छ । नेपाल टेलिभिजनमा शाहले पाँच वर्ष काम गरेकी छिन् । २०६० देखि ६५ सम्म नेपाल टेलिभिजनमा उनले युद्ध र युद्ध पछिको समाजको चित्र देखाईन र आवाज भरिन् ।
पत्रकारिता सुरु गरेको करिव १० वर्षसम्म त उनले युद्धका धेरै विषय उठाइन् । ६० पछि देशमा विभिन्न आन्दोलनहरु भए । ती आन्दोलनले उठाएका मुद्धाहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि कलम र आवाजको माध्यमबाट जोडबल गरिन् । यो देशमा आएको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तनको पछाडि एक एक मानिसहरुको हात र त्यो हात लिला शाहको पनि हो ।
त्यहि बीचमा गठन भएको थियो राप्ती सञ्चार सेवा संस्था । २०६१ सालमा दाङमा गठन भएको राप्ती सञ्चार सेवा संस्थाको अध्यक्ष भएर उनले स्थानीय टेलिभिजन सुरु गरिन् । स्थानीय स्तरबाट टेलिभिजन सञ्चालन गर्नु त्यति सहज भने थिएन ।
स्थानीयस्तरको स्रोत साधनहरुलाई प्रयोग गर्दै सञ्चारको उच्चतम माध्यमका रुपमा मानिएको टेलिभिजन सञ्चालन गरेर शाहले पत्रकारितालाई थप परिस्कृत बनाइदै गइन् । राप्ती केबलसँगको सहकार्यमा २०६६ साल असोजदेखि हाम्रो टेलिभिजनको नामबाट सञ्चालनमा आएको थियो ।
नेपाल टेलिभिजन र आफ्नो स्थानीय टेलिभिजनका रुपमा प्रशारण भैरहेको हाम्रो टेलिभिजनको अनुभवनको आधारमा २०६५÷६६ देखि केहि समय एभिन्युज टेलिभिजन र केही समय नेशनल टेलिभिजनको राप्ती ब्युरोका रुपमा काम गरिन् । त्यो बीचमा देउुखरीको लमहीमा स्थापना भएको रेडियो हाइवेमा २०६७ सालदेखि समाचार सम्पादकको भुमिकामा काम गर्दै आएकी लिला शाह जिल्लाको विकास र परिवर्तनको साक्षी हुन् ।
पत्रकारिताले समाज र त्यसमा पनि मानिसलाई परिवर्तन गर्नु हो । मानिसभित्रको सोचलाई परिवर्तन गरेर सुन्दर समाजको परिकल्पना गरेर अगाडि बढेको हुन्छ एउटा पत्रकार । लिला शाहले जीवनका २० वर्ष यो क्षेत्रमा खर्चिएकी छिन् । सरकारी क्षेत्रमा खर्चिएको भए पेन्सन पाकिसक्थ्यो होला । तर, शाहले त्यहि सरकार, त्यहि राज्यका नराम्रा पक्षहरु खोज्दै गइन् र परिवर्तनलाई पछ्याइरहिन् । अन्ततः उनलाई समाजले परिवर्तनको साक्षीका रुपमा चिनेको छ ।
पत्रकारको जागिर हुँदैन । सेवा हुन्छ । स्थायी ठेगाना घोराही उपमहानगरपालिका १८ नवलपुर रहेको शाह दर्जन भन्दा बढी संघसंस्था तथा सामाजिक सेवाहरुमा आबद्ध छिन् । नेपाल पत्रकार महासघ जिल्ला उपाध्यक्ष, क्रियाशील पत्रकार महिला मध्यपश्चिम सल्लाहकार, संकल्प महिला सञ्चार संस्था अध्यक्षका रुपमा सक्रिय हुँदै परिवर्तन, विकास र समृद्धिको पक्षमा निरन्तर लागिरहेकी छिन् ।